Tsangambola ho an'i Cheikh Anta Diop - Fahafatesana Afrikhepri
Vakiteny: 7 min
Sept febroary 2014. Efa 28 taona lasa izay hatramin'ny razambentsika tiantsika sy nahasoa Cheick Anta Diop dia niverina tany Ka Ka. Ary isaky ny isan-taona dia hitadidy ny fahatsiarovana azy isika, araka ny fombafomba napetraka nandritra ny taona maro nataon'ireo izay manaiky azy ho "razana fitahiana", miaraka amin'ireo rehetra misy dikany. Saingy ity andro manokana ho antsika ity koa dia tokony ho fotoana ahafahana mijery lalindalina kokoa.
Koa satria ny Wousirè CAD dia nampita ny fahalalany tamin'ny asany, ny asany isan-karazany, inona no nataontsika? Aiza isika amin'ny fikatsahana ny tolona natombony ary izay ireharehantsika matetika loatra - tsara na tsia - ny maha-mpiorina azy (šmsw Diop)?
Hiezaka amin'ny fomba syntetika azo atao izahay hamakivakiana ny asan'i Diop, hamoahana ny mampiavaka azy, hahitana ny antony maha-zava-dehibe ny firaketana azy, ary ny fomba mahasoa azy tsy ho an'i Afrika ihany fa koa ho an'ny zanak'olombelona rehetra ho mpanampy azy. Satria tokoa, ny asan'i Cheick Anta Diop dia tsy maintsy raisina ho toy ny lova ara-kolotsaina sy siantifika maneran-, ary tsy hoe "Afrikana" fotsiny.
Ho fohy araka izay tratra ity fifandraisana ity; izay amin'ny tenany manokana dia fanatanjahan-tena sarotra, satria ahoana ny fomba firesahana momba an'io lehilahy miavaka sy ny asa goavana ataony amin'ny andalana vitsivitsy? Noho izany dia manentana ny mpamaky anay hatramin'ny voalohany izahay haneho fahatakarana raha toa tsy mahantra amin'izy ireo ny atin'ny fifandraisana. Fa farafaharatsiny mba antenaina izahay fa izany dia handrisika ny tsirairay hampitombo ny fahalalany ny sanganasan'ny Master amin'ny alàlan'ny fikarohana ataon'izy ireo manokana, mba hahafantarana bebe kokoa ny fampiasana lalina ao aminy.
Iza moa i Cheick Anta Diop? Tsy hanitatra isika amin'ny filazàna fa izy dia iray amin'ireo mpahay siansa lehibe indrindra niaina tamin'ity taonjato ity. Manam-pahaizana momba ny multidisiplinia izy, ary izany dia mifanaraka amin'ny mari-pahaizana akademika. Cheick Anta Diop dia iray amin'ireo mpahay tantara vitsivitsy eto an-tany izay namorona teoria siantifika momba ny tantara manerantany. Ho an'izany, nahafehy multidisiplinaly marobe izy; izany hoe nanana mari-pahaizana master momba ny siansa "mafy" sy amin'ny siansa sosialy sy olombelona izy.
Cheick no tsy namela an'i Afrika afa-tsy ny sisa tavela amin'izao tontolo izao hamerenana indray ny fahatsiarovan-tenany ara-tantara, ka farany dia manomboka ny dingan'ny fampihavanana amin'ny tenany ihany.
Cheick Anta Diop no manazava ny tantaran'i Afrika, fa ny an'ny Andrefana, ny an'i Azia koa. Izy no ohatra manazava ny niandohan'ny Semites, Arabo, sns. Ary izany tamin'ny fampiasana loharanom-baovao tsy navoaka hitan'ny mpahay tantara an'ny firenen-kafa.
Tamin'ny taona 1945 no nanapa-kevitra ny CAD hanoratra indray ny tantaran'ny zanak'olombelona, ​​satria nanelingelina azy izany. Satria afaka nahatsapa izy tany am-boalohany fa feno fotokevitra fanavakavaham-bolon-koditra, izay nahatonga azy tsy afaka hanome fitantarana kendrena momba ny fizotry ny fivoaran'ny olona rehetra eto an-tany. Tsy ara-dalàna tokoa ny nanamarihany fa nisy olona sasany nanambony tena tamin'izy ireo ny zavatra niainana rehetra nahatonga ny fananganana sivilizasiôna, ary ireo olona hafa - "Afrikana" manokana - dia "niato tamin'ny alina maizina".
Ny tetikasany momba ny famerenana ny soratra dia nihanitombo tamin'ny alalan'ireo asa lehibe maro, izay nanokatra ny lalana “Firenena sy kolontsaina Negro; manomboka amin'ny fahagola Negro taloha ka hatramin'ny olan'ny kolontsaina mainty eto Afrika ankehitriny ”. Manonona an-tsoratra ny lohatenin'ity boky ity isika, satria matetika isika no manome ny endriky ny CAD ho karazana pastetista, raha ny lohatenin'ny asany kosa dia manondro fa asa tsara kokoa izany.
Ny asa manaraka, indrindra indrindra "Ny zaratanin'ny sivilizasiona Negro; angano na fahamarinana ara-tantara ” izay tamin'ny fomba iray ho setrin'ny valin'ny fanakianana indraindray na dia mahery setra aza fa ny bokiny voalohany dia nampiakatra, "Ny firaisankinan'ny kolontsaina any Afrika Mainty", "Afrika mainty talohan'ny fanjanahantany", sns., dia ny asa rehetra izay nanandraman'ny CAD amin'ny fomba goavana indrindra amin'ny fandraisana anjara amin'ny kolikoly rehetra ao anatin'ity dingana lava momba ny fivoaran'ny maha-olombelona ity. Nandramany avokoa ny rehetra mba hamerenana any Afrique ny toerana maha-mpamatsy azy fa tsy ny fiainana ihany, fa ny sivilizasiona ihany koa. Mifanohitra amin'ny zavatra niainana, eny fa na dia ao amin'ny faritry ny siansa aza. Izany no manazava, araka ny efa nolazainay, ny fanakianana feno herisetra azy sy ny fanilikilihana akademika navelany, na dia tao amin'ny fireneny ihany aza. Tsy nanozongozona ny faniriany hanaparitaka araka izay tratra ny vokatry ny fikarohana nataony fa nanolorany an-tsitrapo ny olona rehetra. Manaporofo izany ny fomba fiasa ara-tsiansa. Tsy hay lazaina ny sasany amin'ireo mpitsikera taloha sy ankehitriny.
Ny fahaizan'ny asan'ny CAD dia fintina amin'ny fomba fikarohana multidisiplinia. Fomba izay nampihariny tamim-pahakingana nandritra ny fifanatrehany tamin'ireo manam-pahaizana manerantany amin'ny sehatry ny fiteny, Egyptology, sns nandritra ny Cloo Colloquium tamin'ny 1974. Colloquium izay mikendry ny hamantatra hoe iza no olona tokony hifandray amin'ny vahoaka egyptiana, ary fianakavian'ireo fiteny inona koa no tokony hiraikitra amin'ny egyptiana taloha. Ity no toerana tokony hampatsiahivana eto fa nanambara i CAD fa raha tsy antenaina loatra ny valin'ny Symposium ao Kairo dia hijanona tsy hiasa any Egypte taloha. Fa raha, etsy ankilany, ny fehin-kevitra momba ny asany dia tokony hihoatra ny teoria momba ny mponina ejipsianina taloha "Mediteraneana, fotsy" ary amin'ny fiteny "Afro-Azia" na "Semitika", UNESCO, izay ny fandaminana ny fivoriana dia manintona ny vokany rehetra amin'ny alàlan'ny fanovana ireo boky fampianarana izay mandray ireo teoria diso taloha sy voaloton'ny avonavom-pirazanana; izay tsy misy toerana eo amin'ny sehatry ny siansa. Mbola mampalahelo ihany androany ny manamarika fa na dia nandresy tamin'ny fomba ofisialy ny hafa aza ny asan'ny CAD, dia mbola tsy novaina ireo boky fampianarana, dia voahilikilika hatrany amin'ny taranja akademika ny asany ary toherina izany. firaisana tsikombakomba amin'ny fahanginana. Noho izany dia manasa ny mpamakinay izahay hahafantatra ny tatitra momba io voambolana io, mba ho tsapan'izy ireo ny haben'ny finoana ratsy ananan'ny sasany izay milaza fa manabe ny maha-olombelona ny tantarany.
Tsy ara-dalàna tanteraka fa mandraka androany, amin'ny asa misy fiheverana ara-tsiansa, ny olona iray dia miresaka momba ny ejipsiana taloha ho fiteny "Chamito-Semitika" na koa "Afro-Aziatika". Tsy ara-dalàna tanteraka izany fa ao anatin'ny faritry ny akademika, dia manohy manely angano ny olona izay i Gresy no fonenan'ny sivilizasiôna, demokrasia, filozofia sns. fahagagana grika; iza no iray hafa mirage Grika). Mampalahelo fotsiny fa mandraka androany, tsy fantatsika mazava sy mazava fa ny fahalalinan'olombelona - amin'ny sehatra rehetra - dia nipetraka hatrany amin'ny sisin-tanin'i Afrika, miaraka amin'ny axis South-North. Ary izany na eo aza ny porofo ara-tsiansa nomen'ny CAD.
Miharihary fa ity fanekena ny zava-misy ity dia hitarika ranomaso, caesura ao an-tsaina amin'ireo izay mirehareha amin'ny tenany ny zava-bitan'ny zanak'olombelona rehetra. Saingy mety hahasoa ihany izany, satria io no fepetra tsy ilaina amin'ny fampihavanana ny zanak'olombelona rehetra amin'ny tantarany, ary noho izany miaraka aminy. Izany no nandrisika ny asan'ny CAD, fa tsy faniriana pseudo "handrendrika ny vahoaka Afrikana" amin'ny alàlan'ny fanomezana azy ireo tantara malaza feno doka.
Mino tanteraka izahay fa na ankehitriny aza, dia ny antony manosika ny CAD no tokony hibaiko izay mitady marina izay milaza fa manaraka ny làlan'ny Master. Ity antony manosika ity dia tokony hitranga amin'ny faniriana mafy orina ambarao ny fahalalana amin'ny sehatra rehetra (politika, ekonomika, sosialy, siantifika, sns.), ary tsy ho mpanaraka ny fahalalan'ny olona hafa, indrindra rehefa misy fanindrahindrana avy amin'ny ideolojika, fanavakavahana ary hafa. Dia tsy maintsy mahafehy sy manaparitaka an'io fahalalana ioamin'ny faritra rehetra, amin'ny toerana rehetra.
Mampalahelo noho izany fa maro amin'ireo miantso ny tenany hoe CAD ankehitriny no manao mihoatra ny mamerina azy io, fa tsy manao toa azy; mahalala ambarao ny fahalalana. Mihevitra isika fa raha mbola velona ilay Mpitarika, dia hampalahelo ny mahita ny habetsaky ny asa nodiaviny tamin'ny fikarohana lalindalina kokoa.
Izany no antso ho antsika rehetra šmsw Diop ho fanombohana tena izy, ary mba hivoatra amin'ny asa fa tsy halefa any amin'ny famerimberenana izay tsy mandroso ny antony izay niadiany nandritra ny androm-piainany. Satria raha manao izany isika dia hanome voninahitra kokoa ny fahatsiarovany.
Enga anie ny Ka Tompontsika mba hiala sasatra amin'ny fiadanam-po miaraka amin'ny razana sy mpanasoa rehetra, ary avy aiza izy ireo, enga anie izy ireo hanome aingam-panahy antsika hatrany hatrany.
Cheikh Anta Diop: Lehilahy sy miasa
4 vaovao avy amin'ny € 30,50
1 ampiasaina amin'ny € 67,10
Vidio € 30,50
Nohavaozina farany tamin'ny 16 aprily 2021 12:55 maraina
Bizina: anthelmintika, hypotensive, depurative, antibiotika ary antiseptika